Funda indlela yokumisela i-router ukusuka ngo-192.168.1.1 | Iindaba zeGajethi
Uyazi qwalasela i-router ukusuka ngo-192.168.1.1? Kangangexesha elithile ngoku, ii-routers ziye zaba sisixhobo esisisiseko kuwo onke amakhaya xa kufuneka sandise intsimi yokugubungela unxibelelwano lwethu lwe-Intanethi. Nangona kuyinyani ukuba uninzi lweemodem ezifakwe ngabaqhubi nazo zisebenza njenge-router, kwiimeko ezininzi, uluhlu lwabo lwe-Wi-Fi lushiya into enqwenelekayo, ukongeza ekusiboneleleni okunqabileyo kokukhetha.
Kule meko, sinyanzelekile ukuba sithenge i-router, ukuba kunokwenzeka ukuba unobumba obini ukuze uzuze kwizantya ezinikezelwa yi-5 GHz band, ibhendi ethi nangona uluhlu lungabanzi njenge-2,4 GHz, isantya isinika ziphezulu kakhulu. Kule nqaku siza kukubonisa indlela singangena ukucwangciswa kwendlela.
Ingxaki yokuqala esihlangana nayo xa singena kwi-router yethu ngumenzi. Umenzi ngamnye ukhetha ukongeza idilesi ye-IP eyahlukileyo ukuze sikwazi ukungena kwisimo se-router kwaye sikwazi ukuhlengahlengisa iiparameter eziyimfuneko ukuze zihambelane neemfuno zethu, nokuba kungokusebenza okanye ukucima iibhendi, ukutshintsha igama le-SSID, ukwenza ukuba kusetyenziswe i-IP emileyo, ukuvula izibuko ...
1 Yintoni i-router
2 Uyifumana njani i-router
3 Ungayiseta njani i-router
3.1 Guqula igama lenethiwekhi kunye negama eligqithisiweyo le-SSID / iWi-Fi
3.2 Hluza nge-MAC izixhobo ezinokudityaniswa
3.3 Ulawulo lwabazali
3.4 Guqula ijelo lomqondiso wethu
3.5 Vula amazibuko
3.6 Yenza okanye usebenze ii-band
3.7 Guqula igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha
3.8 Jonga ukusebenza ngokuchanekileyo kwendlela
Ukubeka nje, umzila yi umzila, que ujongene nokulawula ukugcwala kwemodem yethuImodem ene-IP, emileyo okanye eguqukayo, esichongwa ngayo kwi-Intanethi. Kuxhomekeke kwinani lemisebenzi esibonelelwa yi-router, iya kuba nexabiso eliphezulu, ke xa uthenga i-router, izinto ezahlukeneyo kufuneka zithathelwe ingqalelo, ezinje ngesantya esiphezulu, iibhendi, kunye nokukhethwa kokumiselwa kweendwendwe. ...
Uyifumana njani i-router
Kwiimeko ezininzi, ukuze ukwazi ukufikelela kwi-router, i-IP oyisebenzisayo ngu-192.168.1.1, kodwa abanye abavelisi bakhethe ukusebenzisa i-192.168.0.1, isizathu sokuba baziqonde kuphela. Kodwa ukongeza kufuneka sazi ngawo onke amaxesha ukuba ngubani igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha, kuba kungenjalo nokuba siyayazi idilesi ye-IP yomzila asiyi kuba nakho ukufaka ubumbeko kwaye sitshintshe iiparameter eziyimfuneko. Olu lwazi ihlala ifumaneka emazantsi esixhobo, ukuze ihlale ikufuphi.
Ukuba ayikho, kuya kufuneka siye kwisikhokelo sokufaka isixhobo. Ukuba siyilahlile, okanye siyilahla kuba sicinga ukuba ulwazi oluqulethwe sisikhokelo aludingeki, singaya kuGoogle sikhangele iphasiwedi kunye negama lomsebenzisi lophawu lomzila esinalo. Olo lwazi iyafana kuzo zonke izixhobo zohlobo kwaye ayihambelani nanini na ngeqhosha le-WIFI esisebenzisayo.
Gcina ukhumbula ukuba ukuba umntu ufuna ukufikelela kwi-router yethu, Kuya kufuneka ungene kuqala kunxibelelwano lwethu lweintanethi, inkqubo enzima kakhulu ukuba asisebenzisi iiphasiwedi eziqhelekileyo zesitayile 123456789, ipassword, igama eligqithisiweyo, qwertyui ... Xa ujonga olu lwazi, kuyacaca ukuba ulwazi lokufikelela kwi-router, nokuba yeyiphi na uphawu, luyafumaneka kwi-Intanethi. .
Emva koko ndikushiya uluhlu kunye needilesi ze-IP ukuze ukwazi ukufikelela kwii-routers zabavelisi abaphambili.
Amakhonkco - http: // 192.168.1.1
IHuawei- http: // 192.168.1.1
I-TP-Ikhonkco: http: // 192.168.1.1
UAsus: http: // 192.168.1.1
Xiaomi: http: // 192.168.1.1
INetgear: http: // 192.168.0.1.
D-Ikhonkco- http: // 192.168.0.1
IBelkin - http: // 192.168.2.1
Kwiimeko ezininzi igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha ngu "admin", kodwa kwezinye, igama lomsebenzisi "ingcambu" kunye negama lokugqitha ngu "admin" okanye "1234" okanye ngokuchaseneyo. Ukuba ayisiyiyo kwezi zimbini, kuya kufuneka ujonge ezantsi kwesixhobo, incwadana yokufaka okanye ujonge i-Intanethi.
Ungayiseta njani i-router
Guqula igama lenethiwekhi kunye negama eligqithisiweyo le-SSID / iWi-Fi
Abaqhubi bahlala beyisebenzisa Igama eliqhelekileyo xa ubiza isignali ye-wifi izixhobo ezisifakelayo, igama ngamanye amaxesha elifana kakhulu nento esinokuyifumana kwindawo esihlala kuyo kwaye kuhlala kunzima kakhulu ukuyikhumbula. Enkosi kwi-router, nangona singayenza ngokuthe ngqo kwimodem, singasebenzisa naliphi na elinye igama kwinethiwekhi entsha ye-Wi-Fi esiza kuyenza kunye ne-router. Ukongeza, kuyacetyiswa ukuba uyitshintshe ukuze abahlobo babanye bangabinalo ithuba lokusebenzisa izichazi magama xa besazi i-SSID yomzila osifakele umqhubi.
Hluza nge-MAC izixhobo ezinokudityaniswa
Ukucoca i-MAC kusetyenziswa ikakhulu kwiinkampani, apho kunganxibelelaniswa kuphela nezixhobo ezigunyaziswe ngaphambili kwinethiwekhi, ke oko akonelanga ukwazi igama lenethiwekhi, umsebenzisi kunye negama lokugqitha. Ukucoca iMAC kusivumela ukuba songeze idilesi ye-MAC yesixhobo sethu ukuze i-router ivumele ukufikelela kwayo. I-MAC yezixhobo injengeplate yelayisensi enazo zonke izixhobo. Le MAC ayiphindi kwaye iyodwa kwisixhobo ngasinye.
Ngombulelo kolu khetho, sinokumisela ukuba yeyiphi iiyure abantwana bethu abanokunxibelelana ngayo ne-Intanethi ngesixhobo esiqhele ukusebenzisa. Nathi sinako ukwenjenjalo misela ukuba ngawaphi amaphepha ewebhu onokuthi uwatyelele ngaphandle kokuba kunye nolawulo lwethu ngalo lonke ixesha.
Guqula ijelo lomqondiso wethu
Ibhendi esetyenziswa yimizila yindlela oyisebenzisayo ukuthumela umqondiso. Ukuba ibhendi ixinene kakhulu, kuba uninzi lweempawu zeWi-Fi kwindawo yethu siyisebenzisa, enye indlela yokuphucula isantya kukutshintsha ibhendi ibe yeyinye enezithuthi ezimbalwa kwindawo esihlala kuyo. Esinye sezona zicelo zibalaseleyo esivumela ukuba silufumane olu lwazi InSSIDer Ofisi yeWindows, o Ukuhlaziywa kweWifi, efumaneka simahla kwiVenkile yeWindows. Sinokusebenzisa usetyenziso olufumanekayo kwizixhobo zefowuni. NjengoWifi Analyzer okanye iNethiwekhi yokuHlaziya.
Ezinye zezicelo esizifakileyo kwikhompyuter yethu zisebenzisa amazibuko avaliweyo ngokungagqibekanga, ukunqanda uhlaselo lwabahlobo babanye. Ukuba sifuna ukonwabela zonke iinketho ezinikezelwa sisicelo, kufuneka siye kwi-router kwaye vula amazibuko esixelela wona, ukuze ngale ndlela zombini isicelo sibe nokufikelela ngokupheleleyo kwi-Intanethi, kuba kungenjalo umsebenzi awuyi kwanela okanye awuzukuya ngqo.
Kumazibuko angama-65.535 afumanekayo, 1 ukuya ku-1023 ngamazibuko aziwayo kwaye asetyenziswa ikakhulu yinkqubo ukunxibelelana nezinye iinkqubo okanye i-Intanethi. Izibuko le-1024 ukuya kwi-49.153 libizwa ngokuba ngamazibuko abhaliswe ngomsebenzi othile. Ukusuka kuma-49.154 ukuya kuma-65.535 sithetha ngamazibuko ashukumisayo okusetyenziswa ngasese, ke azinanjongo zichaziweyo.
Yenza okanye usebenze ii-band
Njengoko benditshilo apha ngasentla, ii-routers, ubuncinci ezona ziphezulu, isinika iintlobo ezimbini zeebhendi: 2,4 GHz, iyafumaneka kuzo zonke iirouters ezisinika uluhlu olukhulu, kunye nebhendi ye-5 GHz, ibhendi ebonakala ngokunikezela ngesantya sonxibelelwano esingaphezulu kakhulu kunaleso sifunyanwa kwii-2,4 GHz, kodwa uluhlu luphantsi. Ukusuka kulungelelwaniso lwe-router, sinokuvula kwaye sisebenzise ukusetyenziswa esifuna ukukwenza kumabhanti, kunye nokusebenzisa igama elahlukileyo ukuze sikwazi ukubachonga ngendlela elula.
Guqula igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha
Akukaze kucetyiswe ukuba utshintshe olu lwazi ngaphandle kokuba sinesidingo sokufikelela kwi-router yonke imihla, kuba ekuhambeni kwexesha, kunokuba kunokwenzeka ukuba silibale igama lomsebenzisi kunye negama eligqithisiweyo ukuba asibhalanga phantsi nje kwesixhobo. Njengoko benditshilo ngasentla, ukuze umntu akwazi ukufikelela kwi-router yethu, kuqala Kufuneka ube nokufikelela kunxibelelwano lwethu lwe-intanethi, into engalindelekanga njengoko senditshilo kwicandelo elidlulileyo.
Jonga ukusebenza ngokuchanekileyo kwendlela
Ukuba uqhagamshelo lwethu lwe-Intanethi alusebenzi njengoko kufanele, okokuqala kufuneka sijonge ukuba ngaba zombini uqhagamshelo lweemodem zethu kunye nolo lomzila wethu luchanekile. Ukwenza oku, kufuneka siye kwiTab yomgangatho, apho iya kuboniswa khona kwicandelo leLog, ukuba i-router unengxaki kunxibelelwano lwakho lweintanethi ithunyelwe yimodem.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Tutorials » Qwalasela umzila